Bobi Wine oo Maraykanka gaaray - BBC News Somali
Bobi Wine oo Maraykanka gaaray
2 Sebtembar 2018
Heesaaga caanka ah isla markaana ah xildhibaanka Bobi Wine ayaa daawayn u tagay dalka Maraykanka arrintaan ayaa daba socota eedaymaha la xiriira in jeelka lagu garaacay laguna jirdilay.
Heesaagaan hore ayaa markii hore laga hor istaagay in uu dalka ka baxo balse Jimcihii ayaa loo ogolaaday in uu dibadda u dhoofo.
Asaga, iyo 32 labo kale oo siyaasiyiin mucaarad ah, ayaa todobaadkii hore lagu soo oogay dacwado la xiiira khiyaano qaran oo ku aaddan dhagax tuurkii la sheegay in lala beegsaday kolonyadii Madaxweyne Yoweri Museveni.
Maxaad ka taqaan ninka isku taagay Madaxweyne Museveni
Bobi Wine oo noqday qodax ku taagan Museveni
Heesaaga siyaasiga isu baddalay ee laf dhuun gashay ku noqday madaxweyne Museveni
Bobi Wine ayaa mar dambe waxaa lagu sii daayey damaanad. Ciidamada ayaa beeniyey eedaymaha la xiriira jirdilka.
Jamcihii, booliiska ayaa xaqiijiyey in Bobi Wine loo ogolaaday in uu dalka dibadda uga baxo si uu u helo daawayn khaas ah, kadib markii dawladdu ay u dirtay sagaal dhakhatr si ay baadhitaan ugu sameeyaan.
Qareenkiisa, Robert Amsterdam, ayaa sheegay in xidigga raabka sidoo kale khamiistii lagu jirdilay laguna xidhay garoonka diyaaradaha "inkastoo garsooruhu uu u ogolaaday in la siiyo baasaboorkiisa waayo wuxuu u baahnaa in uu dalka uga baxo sababo caafimaad"
Uganda popular musician-turned-politician Bobi Wine appeared in court with crutches
Afhayeen u hadlay Booliiska ayaa ku xaqiijyay qoraal uu soo dhigay Twitter-ka in Bobi Wine baaritaan caafimaad la mariyey sababo la xirria eedaymaha sheegaya inla jirdilay.
Booliiska ayaa sheegay in xildhibaan kale oo mucaarad ahaa, Francis Zaake oo asaguna iskudayey in uu dibadda u aado caafimaad uu doonayey in uu dalka isaga baxsado balse ay xidheen.
Jamcihii, taageerayaasha Bobi Wine ayaa dibadbax ka dhigay magaalada caasimadda ah ee Kampala.
Sawirro lagufaafiyey baraha bulshada ayaa muujiyey qiiq ka baxaya waddooyinka, ayadoo warbaahinta maxaliga ah ay sheegtay in dibadxayaasha lagu xakameeyey isku raranta Kamwokya halkaas oo xildhibaanku uu kusoo barbaaray.
Taageerayaasha Bobi Wine oo todobaadkii hore dibadbax ka dhigay Kampala
Isniintii Bobi Wine, oo magaciisa dhabta ah uu yahay Kyagulanyi, ayaa soo muuqday asagoo wata biraha dadka naafada ah ay ku boodaan markii markamadda la horkeenay. Xulufadiisa ayaa sheegaya in ciidmada ilaalada madaxtooyada ay six un u jirdileen intii uu xidhnaa.
Sheekha Jaamacadda Azhar oo sheegay hadalo dumarka ku saabsan oo muran dhaliyay
15 Daqiiqadood ka hor
Israa'iil-Falastiin: Cabashada gaamuurtay ee dagaalka hurisay
Gantaallo lala beegsaday Tel Aviv oo khasaare geystay
Wadaadka lacagaha madax furashada u kala gudbiya burcadda iyo dadka